September 2020 - Nigerians in South Africa
PRETORIA – The Nigerian High Commissioner to South Africa on Wednesday that he would not allow Nigerians to be profiled as criminals in South Africa. Kabiru Bala was addressing protesters
JOHANNESBURG – A group of South Africans calling themselves Only One SA wants Nigerians and Zimbabweans out of the country. The group is expected to march on those country’s embassies
JOHANNESBURG – Foreign nationals in South Africa suffer “routine” harassment, violence and discrimination by locals and government authorities, Human Rights Watch (HRW) said on Thursday. The group said xenophobia remained
Johannesburg, South Africa: A brand-new streaming service Hissbox, launched today, 11th of September 2020. With a focus on ‘telling untold stories,’ the streaming service offers over 400 pieces of content including
NIGERIA Union South Africa (NUSA) said on Sunday that it plans R300,000 (about N6.8 million) relief package for Nigerians, whose businesses were affected by lockdown. Its President, Mr. Adetola Olubajo,
Nigerians in South Africa have expressed displeasure with the spate of cult-related killings among their compatriots. The President of the Nigeria Union South Africa, Adetola Olubajo, who spoke during the
Ikenna Ekwerike reports that amid the ravaging global effects of the COVID-19 pandemic, needy Nigerians in South Africa are not without hope as the Nigerian Union, South Africa, is stepping